सलमान खान बुवा बन्दै ! - Sabasta Entertainmnet
सलमान खान बुवा बन्दै !
सबस्त ईन्टरटेनमेन्ट,काठमाडौँ – यो कुनै चलचित्रको चर्चा होइन। सलमान खान असली जिन्दगीमा नै बुवा बन्दैछन। तर फेरी यसको मतलब उनि बिबाह गर्दैछन भन्ने पनि होइन। तर उनि बुवा चाहिँ बन्दैछन। सलमान नजिक एक पारिवारिक श्रोत का अनुसार सलमान सरोगेसी मार्फत बुवा बन्ने योजनामा छन्। सलमान को बिबाह हुन्छ या हुदैन , कुनै भर छैन। जत्ति पनि महिलाहरु सलमान को जीवन मा आए , उनीहरु कोहि पनि टिकेनन्। उनको उमेर पनि ५० नाघिसक्यो। यस्तो मा उनले खान परिवार मा आफ्नो बच्चा भने प्रवेश गराउने निधो गरेका छन्।
बलिउड मा धेरै सरोगेसी मार्फत आमा बुवा बनेको उदाहरण छ। शाहरुख खान , आमिर खान , करन जोहर , एकता कपुर लगायत का सेलेब्रिटि सरोगेसी मार्फत नै बुवा आमा बने। अब सलमान पनि यहिँ बाटो तर्फ लाग्दैछन। सलमान बच्चाहरु संग एकदमै घुलमिल हुन्छन भन्ने त हामीले देखेकै छौ। भान्जा आहिल संग उनको सम्बन्धले यो पुस्टि गर्छ।